In ka badan 22 sano oo khibrad ah
Qiimayaasha, anshaxa, iyo dhaqanka
Dadku waa diiradda
6-da sababood ee ugu sareysa ee naloo doorto
Maro Fiberglass Sunscreen
Qorraxda Zebra Fabric
Dharka Indhoolayaasha Rullaluistemadka
Maro Fiberglass Blinds Fabric
Dharka Indhoolayaasha Vertical
Honeycomb Indhoolayaasha Dharka
Qurxinta Guriga Verman Blinds Fabric Semi-madow
Naqshad Cusub Cajalad jaranjarada jaranjarada Shangri-La Indhoolayaasha F ...
Qurxinta Horizontal Shangri-La Blind Fabric Semi-B ...
Qurxinta Guryaha Labbada Indhoole ee Indho-sarcaadka ee Xafiiska
Shiinaha Qurxinta Asturnaanta Zebra Blind Fabric Xafiiska Wi ...
Midabyo badan oo labalaab leh oo indho-sarcaadiya Dharka 100% Polyester
Qaanso roobaadka Indhoolayaasha Day-Night-Zebra daahyada daahyada ...
Daabacaadda Madow Zebra Day iyo Night Rainbow Duo Bl ...
Shiinaha Roller Blinds Day & Night Hooska Part Com ...
Shiinaha Office Side Screen Custom sunscreen Zebra Auto ...
Shiinaha Machine Mainland Faux Linen Zebra Dual Day iyo ...
Shiinaha Windows Windows Sun Hadh Polyester Sunscreen Rolling ...
Daaqad Shutter sunscreen Qaabka Rullaluistemadka Guga ...
Shiinaha Windows Sun Shade Polyester Rolling Motorized ...
Bannaanka Buugga Daaqadda Dabaq ah Qeybta Labaad Hooska Labaad ...
Soosaarista Qorraxda Qorraxda ee Shiinaha Blinds Facto ...
Baro Shaashadda Shaandhaynta Shaandheynta Ganacsi ...
Kartoo Width Shiinaha Windows Qurxinta daah Co ...
Shiinaha Manufacturer Sunscreen Roller Blinds Fabric Su ...
Daad-Maro Muraayadaha Anti-UV Maro-qoraxda Waayo R ...
Sample Semi Blackout Roller Blind Fabric oo Bilaash ah
Eco-Friendly Roller Fabric Polyester Semi Madoow
2020 Style-ka Cusub ee Verman Blinds Fabric 3m Ballaar Xafiiska
Dharka indha la 'Verman waa shey la casriyeeyay oo ka mid ah dharka indha la' ee Shangri-La. Kaliya kuma ekaato saameynta foosha xun ee xijaabka dharka indha la'aanta ah ee Shangri-La, laakiin sidoo kale waxay leedahay qaabka moodada fudud ee indhoolayaasha venetian. Naqshadaynta furitaanka furan ee marada indha la 'waxay ku habboon tahay ka-qaadista boodhka maalin kasta, hoos u dhigidda iyo shaqada kale ee nadiifinta. Groupeve Verman dhar indha la 'ayaa ah xulashada ugu habboon ee mashruuca indhoolayaasha gurigaaga. Dharka wuxuu isticmaalaa dun khaas ah wuxuuna maraa daaweynta heer-kulkeedu sareeyo, taas oo waarta oo aan duulin.
Dayactirka iyo nadiifinta dharka 'indhashareerka' Groupeve zebra blinds waa sida hoos ku xusan:
1. Nuugista faakiyuumka iyo ka qaadista boodhka.
2. Isticmaal maro jilicsan ama isbuunyo qoyan oo biyo diirran leh si aad u tirtirto daahyada inta boodhka laga jarayo / la nadiifinayo. Haddii loo baahdo, saabuunno fudud ayaa lagu dari karaa. Si tartiib ah u masax si aad uga hortagto duuduubnaanta ama dhaawaca dharka. Masaxiddu waxay daaha ka dhigi kartaa nadiif.
3. Adeegso birta uumiyaha si aad ugu buufiso meel qiyaastii 10 cm ah oo ka fog daahka marada, taas oo yeelan karta saamaynta boodhka / nadiifinta.
Shiinaha Factory Supply Silhouette Blinds Fabric 100% Polyester
Dharka indhoolayaasha 'Silhouette' waa shey la casriyeeyay oo ka mid ah dharka indha la 'ee Shangri-La, waa ikhtiyaar in la ilaaliyo asturnaanta iyo ilaalinta nalka. Mindida ayaa laga joojiyay inta udhaxeysa labada lakab ee shaashadaha. Marka indhoolaha la furo, muuqaalka soo jiidashada leh ayaa lagu arki karaa shaashadaha, nalka qolka galana sidoo kale waa la sifeeyaa si uu u noqdo mid jilicsan; marka indhoolaha la xiro, waxaad xaqiijin kartaa asturnaanta shaqsiyeed halka aad iftiiminayso qaabka jilicsan ee jilicsan ee indhoolayaasha Shangri-La.
Erey ahaan, dharkeenna indhoolayaasha ah ayaa ah xulashada ugu fiican ee indhoolayaasha warshadaha ama jumladlayaasha. Waxaan u soo bandhigi karnaa shaybaarro bilaash ah dharka indhoolayaasha silhouette macaamiisheenna. Iyo duub kasta oo qaanso roobeed indho sarcaad ah waa inuu ka gudbaa imtixaanka tayada ka hor rarka.
Cajaladda Joogtada ah ee Joogtada ah Shangri-La Blinds Fabric 100% Madoow
Cajalad sallaan ah shangri-la blinds fabric waa shey la casriyeeyay oo ka mid ah dharka indhoolayaasha Shangri-La. Kaliya kuma ekaato saameynta foosha xun ee xijaabka dharka indha la'aanta ah ee Shangri-La, laakiin sidoo kale waxay leedahay qaabka moodada fudud ee indhoolayaasha venetian. Cajaladda 'Groupeve Ladder tape' shangri-la blinds fabric waxay kuu keeni kartaa dareen aan dhammaad lahayn oo u dhow dabeecadda, dabacsan oo faraxsan, sidoo kale waxay kuu keeni kartaa dareenka aamusnaanta iyo inaad janno ku jirto. Waxaa loo qaybiyaa cajalad semi-madoobaadka shaar shangri-la dhar indho la 'iyo madow madow sallaan shangri-la dhar indho la'.
Waxyaabaha ka samaysan cajaladda sallaan shangri-la dhar indha la 'waa 100% polyester. Waxaan bixinaa muunado bilaash ah dhammaan macaamiisha, waad hubin kartaa tayada oo aad si toos ah u dooran kartaa midabka kahor dalabka. Waxaa intaa dheer, dharkayagu midabkiisu hodan buu yahay oo wuxuu la socdaa isbedelka moodada caalamiga ah.
Naqshad Casri ah Verman Blinds Fabric 100% Polyester
Dharka indha la 'Verman blind' waa nashqad-cusub oo isku-darka shaashadda dharka, shaashadda daaqadda iyo indhoolayaasha vetanka. Waxay leedahay shaqooyin ah hooska iyo qurxinta daahyada. Waxaana aad loogu adeegsadaa xafiisyada, guryaha, hudheelada, warshadaha iyo munaasabadaha kale. Groupeve Verman dhar indho la 'ayaa kuu keeni kara dareen aan dhammaad lahayn oo u dhow dabeecadda, nasasho iyo farxad leh, sidoo kale waxay kuu keeni kartaa dareenka aamusnaanta iyo inaad janno ku jirto. Waxaa loo qaybin karaa verman blinds blinds fabric iyo verman madow oo indha-sarcaadiya dhar madow.
Maaddada verman indhoolayaasha dharka waa 100% polyester. Waxaan bixinaa muunado bilaash ah dhammaan macaamiisha, waad hubin kartaa tayada oo aad si toos ah u dooran kartaa midabka kahor dalabka. Waxaa intaa dheer, dharkayagu midabkiisu hodan buu yahay oo wuxuu la socdaa isbedelka moodada caalamiga ah.
Naqshad Casri ah oo Casri ah oo Casri ah oo Indhooleyaal Dhar ah 100% Madoow
Dharka indhoolayaasha silhouette waa nashqad-cusub oo isku-darka shaashadda dharka, shaashadda daaqadda iyo indhoolayaasha venetian-ka. Waxay leedahay shaqooyin ah hooska iyo qurxinta daahyada.
Dayactirka iyo nadiifinta dharka Groupeve zebra blinds difaan waa sida hoos ku xusan:
1. Nadiifinta Ultrasonic waxay ka dhigeysaa dharka mid dhalaalaya sida cusub.
2. Nuugista faakiyuumka iyo ka qaadista boodhka.
3. Nadiifi nadiifinta waa in lagu gaaro nadiifin qoto dheer, fadlan isticmaal faakiyuum lagu nadiifiyo oo leh madaxa burushka si tartiib ah u nadiifi. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa timo engejiye (oo aan kululayn) si aad boodhka uga jafto qurxinta daaqadda.
Maqaarkayaga silhouette indhoolayaasha ayaa ah doorashada ugu fiican ee indhoolayaasha warshadaha ama jumladlayaasha. Waxaan u soo bandhigi karnaa shaybaarro bilaash ah dharka indhoolayaasha silhouette macaamiisheenna. Iyo duub kasta oo qaanso roobeed indho sarcaad ah waa inuu ka gudbaa imtixaanka tayada ka hor rarka.
Naqshad Cusub Cajalad jaranjarada jaranjarada Shangri-La Indhoolayaasha Dharka Madoow
Cajaladda sallaan ee shangri-la blinds fabric waa shey la casriyeeyay oo ka mid ah dharka indhoolayaasha Shangri-La, waa ikhtiyaar in la ilaaliyo asturnaanta iyo iftiinka xakamaynta. Groupeve jaranjarada sharooto shangri-la dhar indho la 'ayaa kuu keeni kara dareen aan dhammaad lahayn oo u dhow dabeecadda, dabacsan oo faraxsan, sidoo kale waxay kuu keeni kartaa dareenka aamusnaanta iyo inaad janno ku jirto. Waa doorashada ugu habboon ee mashruuca indhoolayaasha gurigaaga. Dharka wuxuu isticmaalaa dun khaas ah wuxuuna maraa daaweynta heer-kulkeedu sareeyo, taas oo waarta oo aan duulin.
Dhererka duudduuban oo ah 30m, xirxirantuna waa tuubo warqad ah oo xoog leh duubkiiba. Waxaan bixinaa muunado bilaash ah dhammaan macaamiisha, waad hubin kartaa tayada oo aad si toos ah u dooran kartaa midabka kahor dalabka. Waxaa intaa dheer, dharkayagu midabkiisu hodan buu yahay oo wuxuu la socdaa isbedelka moodada caalamiga ah.
Qiimaha Warshadda Verman Indho-beelka Dharka Semi-Madoow
Verman blinds fabric waa shey la casriyeeyay oo ka mid ah dharka indha la 'ee Shangri-La, waa nashqad-cusub oo isku dhafan shaashadda dharka, shaashadda daaqadda iyo indhoolayaasha venetian-ka. Waxay leedahay shaqooyin ah hooska iyo qurxinta daahyada. Waxaana aad loogu adeegsadaa xafiisyada, guryaha, hudheelada, warshadaha iyo munaasabadaha kale. Waa ikhtiyaar in la ilaaliyo asturnaanta iyo ilaalinta nalka.
Maaddada verman indhoolayaasha dharka waa 100% polyester. Dhererka duudduuban oo ah 30m, xirxirantuna waa tuubo warqad ah oo xoog leh duubkiiba. Waxaan bixinaa muunado bilaash ah dhammaan macaamiisha, waad hubin kartaa tayada oo aad si toos ah u dooran kartaa midabka kahor dalabka. Waxaa intaa dheer, dharkayagu midabkiisu hodan buu yahay oo wuxuu la socdaa isbedelka moodada caalamiga ah.
Cajaladda Tayada Sare ee Shangri-La Blinds Fabric 100% Polyester
Cajaladda sallaan ee shangri-la blinds fabric waa nashqad-cusub oo isku-darka shaashadda dharka, shaashadda daaqadda iyo indhoolayaasha venetian-ka. Waxay leedahay shaqooyin ah hooska iyo qurxinta daahyada. Waxaana aad loogu adeegsadaa xafiisyada, guryaha, hudheelada, warshadaha iyo munaasabadaha kale. Waa ikhtiyaar in la ilaaliyo asturnaanta iyo ilaalinta nalka. Marka indhoolaha la furo, muuqaalka xiisaha leh waxaa lagu arki karaa shaashadaha, marka indhoolaha la xiro, waxaad xaqiijin kartaa asturnaanta shaqsiyeed.
Dharka wuxuu isticmaalaa dun khaas ah wuxuuna maraa daaweynta heer-kulkeedu sareeyo, taas oo waarta oo aan duulin. Waxyaabaha ku duuban dharka cajaladda shangri-la blinds waa 100% polyester. Waxaan bixinaa muunado bilaash ah dhammaan macaamiisha, waad hubin kartaa tayada oo aad si toos ah u dooran kartaa midabka kahor dalabka. Waxaa intaa dheer, dharkayagu midabkiisu hodan buu yahay oo wuxuu la socdaa isbedelka moodada caalamiga ah.
Dharka indha la 'Verman waa shey la cusbooneysiiyey oo ka mid ah dharka indha la' ee Shangri-La, oo isku daraya shaashadda dharka, shaashadda daaqadda iyo indhoolaha indhaha. Waxay leedahay shaqooyin ka mid ah hooska iyo qurxinta daahyada, taas oo ka dhigaysa xulasho habboon in la ilaaliyo asturnaanta iyo ilaalinta nalka. Groupeve verman dhar indha la 'ayaa kuu keeni kara dareen aan dhammaad lahayn oo u dhow dabeecadda, dabacsan oo faraxsan, sidoo kale waxay kuu keeni kartaa dareenka aamusnaanta iyo inaad janno ku jirto.
Dharka wuxuu isticmaalaa dun khaas ah wuxuuna maraa daaweynta heer-kulkeedu sareeyo, taas oo waarta oo aan duulin. Maaddada verman indhoolayaasha dharka waa 100% polyester. Waxaan bixinaa muunado bilaash ah dhammaan macaamiisha, waad hubin kartaa tayada oo aad si toos ah u dooran kartaa midabka kahor dalabka. Waxaa intaa dheer, dharkayagu midabkiisu hodan buu yahay oo wuxuu la socdaa isbedelka moodada caalamiga ah.
Sanadka 2020 Qaab Cusub Qaab Mashiinka Semi-Madoow
Dharka lakabka saddexda ah ee loo yaqaan 'Groupeve' ayaa ah mid u gaar ah muuqaalka iyo muuqaalka quruxda badan. Isku-xidhka dharka fidsan ee u dhexeeya laba lakab oo ah dhar dhaadheer ayaa qolka ka dhigi kara mid jilicsan. Wareeji daab si aad u hagaajiso xoogga nalka. Maaddada dharka gaarka ah leh ayaa midabka ku hayn kara muddo dheer. Hadhka adag. Nadiifinta Ultrasonic ee dharka ayaa loo isticmaali karaa si dharka looga dhigo mid dhalaalaya sida cusub.
Marka loo eego astaamaha dharka lakabka saddex-geesoodka ah, waxaa loo kala qaybin karaa dharka lakabka saddex-geesoodka ah ee loo yaqaan 'semi-blackout' iyo dharka lakabka saddex-geesoodka ah. Waxyaabaha ku jira dharka lakabka seddexaad waa 100% polyester. Groupeve waxay leedahay in ka badan 16 sano oo khibrad ah soo saarista dharka lakabka quruxda badan oo hightriple.
Dharka loo yaqaan 'Shangri-La Blind Fabric Semi-Blackout'
Shangri-La blinds waa nashqad-cusub oo isku-darka daahyada korantada, shaashadaha daaqadaha, indhoolayaasha venetian iyo indhoolayaasha rooga. Indhoolayaasha Shangri-La ee suuqa waa inay isbarbar dhigaan laba astaamood oo culus: caddeyn iyo dabacsanaan. Caddaynta ayaa inta badan ka muuqata dhumucda, qaabdhismeedka iyo maaddada dunta ee qaybta mesh. Marka daah-furnaanta sare ee Shangri-La blind la furo, iftiinka qolka gala ayaa ka sii tiro badan oo jilicsan; markuu xirmo, sidoo kale wuxuu si fiican u qarin karaa asturnaanta. Darajada geesaha dabacsan ayaa badanaa ka muuqda heerka polymerization-ka mesh iyo qaybta adag ee dunta.
Tayada tayada sare leh ee 'Groupeve shangri-La' oo indhashareysa waxay adkeysan kartaa xoog jiid xoog leh, mana soo saari doonto burrs ka culus isticmaalka maalinlaha ah. Isku soo wada duuboo, markaad dooranaysid dharka, fadlan fiiro gaar ah u yeelo tayada, kaliya markaa waxaad dooran kartaa maro indho sarcaad ah oo indha sarcaad leh oo qancisa, raaxo leh, oo lagu kalsoonaan karo.
Shangri-La Blind Fabric Semi-madow
Shangri-La blinds waa nashqad-cusub oo isku-darka daahyada korantada, shaashadaha daaqadaha, indhoolayaasha venetian iyo indhoolayaasha rooga. Nolosha adeegga ee dharka indhaha ee Shangri-La waa mid aad u dheer, waxay u adkeysataa heerkulka sare iyo qabow hooseeya iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyinkeeda. Asal ahaan, dhibaatada nolosha shaqadeed ee hoos u dhacday heerkulkeedu hooseeyo kuma dhacdo meelaha leh saacado qorrax dheer ama heerkulka qaboobaha oo hooseeya. Sidan oo kale, nolosha adeegga ee Shangri-La aad ayaa loo ballaariyay.
Haddii jawiga gudaha uu yahay mid aad u fiican, marka lagu daro dhicitaanka maalinlaha ah iyo nadiifinta qadar yar oo boodh ah dharka, waxay asal ahaan ku guuleysan kartaa saameynta in ka badan 10 sano oo la isticmaalo.
123456 Xiga> >> Bogga 1/20
Cinwaanka: No.1098 Qaybta Dhexe ee Jiannan Avenue, Teknolojiyada Sare. Aagga, Chengdu, Shiinaha